ညီရဲသစ်: သူခိုးကြီးည တစ်ည
Posted by ညီရဲသစ် at 02:18
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!9November 2011 at 03:49
တောဓလေ့သဘာဝလေးတွေက ဖတ်ရတာ ပိုလွမ်းစေတယ်အကို..
စံပယ်ချို9November 2011 at 04:29
ကြက်ခိုးခြင်း၊ ဘူးသီးခိုးခြင်း တို့အမြဲကြားခဲ့ဖူးတာပဲရှိတယ်
ကိုဇော်9November 2011 at 05:27
တကယ်ကို ပျော်စရာ အဖြစ်လေးတွေပေါ့။
ကိုရင်9November 2011 at 08:12
အင်းး ပြောရရင်တော့ ပေါ်ကုန်တော့မှာပဲ ဟီးဟီးး
blackroze9November 2011 at 10:21
mstint9November 2011 at 10:27
သူခိုးကြီးည နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်း တီတင့်ရဲ့ဗျူတီးစလွန်းဆိုင်က ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို မောင်ညီရဲတို့လို ကာလသားတစ်သိုက် ဖြုတ်ယူသွားပြီး အိမ်ရှေ့တိုက်ရဲ့ ခေါင်မိုးမှာ သွားချိတ်ထားတာကို မမေ့နိုင်ဖြစ်နေတယ်း))
လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ အမြဲသတိရစေမယ့် အမှတ်တရရက်တွေပေါ့။
Candy9November 2011 at 10:41
သူလည်း ကိုးရီးယားကားလို အပိုင်းနဲ့... ဟိဟိ
ဒုတိယပိုင်းကို မျှော်နေပါတယ် အစ်ကို.. :)
မြူးမြူး9November 2011 at 11:14
ကာလသားချက်လေးစားမလို့လာတာ.. ခုထိကြက်ခိုးခန်းက မတက်သေးဘူး.. ဟင်းမြန်မြန်ချက်ပါမောင်ညီရဲ..း)
Cameron9November 2011 at 15:11
သီတင်းကျွတ်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းတောင်ရောက်ပြီဆိုတော့ ညီရဲသစ်တို့ ဖဘမှာ ကြော်ငြာဝင်ထားတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား....း))
ဒါနဲ့ ဒီနေ့ပဲ ရုံးမှာ ကာလသားဟင်းချက်စားကြတယ်...။
မိုးခါး9November 2011 at 19:03
မလုပ်ဘူးပါဘူးဗျာ .. ကိုယ်က ကာလသား မဟုတ်ပဲ ကာလသမီး ဖြစ်နေလို့ .. :P
ညိမ်းနိုင်9November 2011 at 21:21
အေး...ဒီနှစ် နာ့ ကြက်မကြီးပျောက်ရင်တော့ ညီရဲပဲ...ရဘူး....နင့်ဘာသာ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 10 November 2011 at 00:28
အော်.. အိမ်အောက်က ကြက်ပျောက်သွားတာ ညီရဲတို့ လက်ချက်ကိုး..
မနက်ဖန်ကျ လျော်ကြေးလာတောင်းမယ် ပေးဖို့သာပြင်..
တို့ဘက်မှာလဲ အဲလို ကြက်ခိုးတာ ဘူးသီးခိုးတာတွေ ရှိကြပါတယ်.. ငယ်တုန်းကတော့ တန်ဆောင်တိုင်ဆို နေရင်းထိုင်ရင်းပျော်တယ်..
သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ သူများဆိုင်းဘုတ်တွေ နေရာရွေ့ ခုံတွေနေရာရွေ့ ဆေးခန်းက ဆိုင်းဘုတ်ကို စားသောက်ဆိုင်ပို့ စားသောက်ဆိုင် ဆိုင်းဘုတ်ကို ဗေဒင်ဆိုင်ပို့ အဲသလို ပျော်စရာတွေ အကုန်လျှောက်လုပ်တာ.. နောက်တစ်နေ့ဆို ဆိုင်တွေ အသီးသီး ဆိုင်းဘုတ်ပျောက်လို့ရှာ.. ခုံပျောက်လို့ရှာ.. အဲသလို သောင်းကျန်းကြတာ.. ငယ်တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းနေတာပါဘဲ. ခုများတော့ ပျော်တော့ဘူး.
လမင်းငယ် 10 November 2011 at 10:35
ကြောင်ဖြူများရှင် 11 November 2011 at 15:26
ကြက်သားဗူးသီးလည်းစားရဘူး။ မယ်ဇလီဖူးသုပ် လည်း စားရဘူး။ :(
မြသွေးနီ 11 November 2011 at 17:19
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကျီးမနိုးပွဲကို ကိုယ်တိုင် မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ တော်ယုံလောက်ကတော့ ပျော်စရာ ဓလေ့မို့လို့ နားလည်ပေးကြတယ်။ တချို့ကတော့ အပျော်လွန်ပြီး အပျက်ဖြစ်ကြတော့ ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောလွှတ်တတ်သူတွေကိုလည်း သတိထားရသေးတယ်နော်။
ညီလင်းသစ် 12 November 2011 at 09:11
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သူများတွေ လုပ်ကြတာ တွေ့ဖူးတယ်ဗျ..၊ ဘေးကနေ ကြည့်ရတာတောင် ပျော်စရာကြီး..၊ ရိုးရာမဟုတ်ပေမယ့် လူငယ်တွေရဲ့ ဓလေ့တစ်ခုလို ဖြစ်နေတော့လည်း လူကြီးတွေက ဒီလိုပဲ ခွင့်လွှတ်၊ နားလည် ပေးလိုက်ကြတယ်နဲ့ တူပါတယ်၊ ဒုတိယပိုင်းကို စောင့်နေပါတယ်..။
laminlwinpyin 13 November 2011 at 13:46